Global Voices teny Malagasy » India: Miaro ny fahalalahana miteny · Global Voices teny Malagasy » Print
India: Miaro ny fahalalahana miteny
Voadika ny 12 Novambra 2018 2:44 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka
Niraondraona nandritra ny faran'ny herinandro ny tontolon'ny bilaogy Indiana tamin'ireo lahatsoratra sy fanehoan-kevitra manodidina ny ivontoeram-pampianarana iray izay nampiady hevitra. Nandefasan'ity ivontoerana ity mailaka ny Vintage Point, bilaogy iray tantanan'i Gaurav Sabnis, mba hanaisotra ny lahatsoratra rehetra izay nanontany (nitsipaka) ny filazan'ny ivontoerana. Ny lahatsoratra tany am-boalohany izay nanome aingam-panahy ireo lahatsoratra tao amin'ny bilaogy dia azo vakiana ao amin'ny JAM Magazine ato . Rashmi Bansal, ao amin'ny Youth Curry, no iray tamin'ireo hery mitarika ity gazetiboky ity lasibatra tamin'ny fanehoan-kevitra ankamelimely sy tsy nitonona anarana . Bilaogy maro anisan'izany ny Sambhar Mafia  sy Desi Pundit  no nanaraka akaiky ny fivoaran-draharaha .
Bilaogy Indiana  maro  no namerina izany antso ho fanohanana izany . Ny vaovao farany  dia ny hoe niala tamin'ny asany tao amin'ny IBM i Gaurav Sabnis . Hoy izy -
… niala tao amin'ny IBM aho. Ny fanapahan-kevitra dia avy amiko manokana ary tsy nangatahan'ny IBM hametra-pialana aho, ary tsy nanery ahy ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny IBM. Noraisiko izany fanapahan-kevitra izany noho ny fandrahonana tena hafahafa sasany izay toa hita fa nataon'ny IIPM tamin'ny IBM …
Tao anatin'io lahatsoratra io ihany , nanolotra ny fanehoan-kevitra matanjaka ho an'ny lahatsorany teo aloha izy sy ny antony ijoroany amin'ny zavatra nolazainy tao amin'ny bilaoginy -
… ny fikasako dia ny ho eo akaikin'ny lahatsoratro, satria mino ny fahalalahana miteny aho. Tsy nanoratra zavatra izay azo eritreretina ho toy ny fanalam-baraka aho. Fikambanana ao amin'ny India malalaka izay manome fitakiana sasantsasany ao amin'ny dokambarotra ataony ny IIPM. Ny nampiasa ny zoko amin'ny maha-olom-pirenena ahy ny zavatra nataoko, tamin'ny alalan'ny famaliana ny vaovao voarakitra …
Tsy vao voalohany ho an'ny bilaogera Indiana ny miatrika ny fahatezeran'ny orinasa sy ny fikambanana lehibe, kanefa mitondra antsika miverina mankany amin'ny fanontaniana indray hoe – Ao amin'ny firenena iray izay ny USP no Demokrasia Lehibe Indrindra, nanjavona taiza ny Zo ho an'ny Fahalalahana Maneho Hevitra? Mora kokoa ve ny mandrahona bilaogera noho ny gazetiboky na ny famoaham-baovao avy amin'ny Fampahalalam-baovao Mahazatra? Manan-jo ve ny bilaogera?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/12/129764/
 Nandefasan'ity ivontoerana ity mailaka : http://gauravsabnis.blogspot.com/2005/10/im-disconnecting-my-cable-connection.html
 azo vakiana ao amin'ny JAM Magazine ato: http://www.jammag.com/careers/articles/mbacorner/iipm/
 fanehoan-kevitra ankamelimely sy tsy nitonona anarana: http://youthcurry.blogspot.com/2005/10/lies-damned-lies-and-fake-blogs.html
 Sambhar Mafia: http://sambharmafia.blogspot.com/2005/10/join-fight-against-iipm-and-string-of.html
 Desi Pundit: http://www.desipundit.com/2005/10/08/lies-damned-lies-and-fake-blogs/
 Bilaogy Indiana: http://absurdiav.blogspot.com/2005/10/nasty-iipm-some-memories.html
 namerina izany antso ho fanohanana izany: http://www.swaroopch.info/archives/2005/10/09/will-the-real-iipm-please-stand-up/
 vaovao farany: http://gauravsabnis.blogspot.com/2005/10/update.html